Izinqolobane ZikaJesu - Ukubalwa kabusha kuya eMbusweni
Tag Archives: uJesu
Indaba eyiqiniso ngomfana wezinkomo nopapa.
… Uzokwazi ukuthwala isisindo sesiphambano.
IValeria - Nginguye Onguye!
Umama wakho uzokuholela ekusindisweni.
Umphefumulo waseCalifornia - The Passion of the Church
Zilungiseleleni ukukhuphuka eKalvari.
… Ngilinde uthando lwakho.